အောင်မြင်သူတွေ လက်ဆုတ်ကိုင်ထားတဲ့ စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှု - YOYARLAY Digital Media and News
လောကမှာ လူသားအားလုံးက အမြဲပြောကြတဲ့ စကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့အောင်မြင်တဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ မိမိဘေးက လူတိုင်းကို မေးကြည့်ပါအောင်မြင်ချင်ကြလား ဆိုရင် သူတို့ ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်…။ အောင်မြင်ချင်ကြပါတယ်လို့…။ ယခုသင်ကိုယ်တိုင်ကော အောင်မြင် ချင်နေပါတယ်မဟုတ်လား။ ကဲဒါဆို အောင်မြင်မှု ကြီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ဆန်းစစ်ကြည့် ကြရအောင်…။
Success ဆိုတဲ့ အောင်မြင်မှု စကားလုံးကတော့ မိမိရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်၊ ကို ရောက်ရှိတာ၊(သို့) မိမိလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခု ပြည့်စုံ ပြီးမြောက်တာ ကိုဆိုလိုပါတယ်။ လူတိုင်း အောင်မြင်မှု နဲ့ ပတ်သက်ရင် ခံယူမှု ကွဲပြားကြလိမ့်မယ်။ သင့်မှာလည်း အောင်မြင်နဲ့ ပတ်သက်ရင် တစ်မျိုးခံယူထား မှာသေချာတယ်။ အခုပြောပြချင်တဲ့ စစ်မှန်တဲ့ အောင်မြင်မှု ကိုဆက်လက်ကြည့်ကြရအောင်…။
၁။စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာ သင်ယခုရပ်တည်နေတဲ့ ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှု ရရှိနေခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်။
လူတွေက အောင်မြင်မှု လို့ သာပြောနေကြတယ်.. တစ်ကယ်အောင်မြင်ပြီးလည်း စိတ်မပျော်ရွှင် နေကြဘူး။ အမြဲပူပင်စိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်။.. ဒါဆိုတစ်ကယ် အောင်မြင်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါသလား။ ဒီနေရာမှာ တစ်ချို့ သောလူအများစုက အောင်မြင်မှု ကို ပိုက်ဆံဘယ် လောက်ရှိလဲ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု ဘယ်လောက်များတာ နဲ့ တိုင်းတာကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ထိုအရာတွေကို သင်ထာဝရ ပိုင်ဆိုင်မယ်လို့ ထင်နေရင်မှားပါလိမ့်မယ်။ သေချာတာကတော့ စစ်မှန်သော အောင်မြင်မှုကို ငွေကြေးပိုက်ဆံရှိရုံနဲ့ မတိုင်းတာနိုင်ပါဘူး။ မိမိရဲ့ အမြင်ကတော့ ဘယ်လောက်ပျော်ရွှင်တာနဲ့ပဲ တိုင်းတာပါတယ်။
၂။ စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုထဲမှာ ပိုက်ဆံနဲ့ သြဇာ အာဏာ ရှိရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး..။
တကယ်တော့ အောင်မြင်မှုအစစ်က စိတ်ချမ်းသာ သုခ၊ အသိပညာအမြော်မြင်ရှိမှု၊ တစ်ပါးသူများကို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီစောင့်ရှောက်မှု စတဲ့ အရာများနဲ့ ဖွဲ့ စည်းထားပါတယ်။ လူတော် တော်များများရဲ့ အတွေးမှာ ငါပိုက်ဆံရှိရင် ကြိုက်တာ လုပ်နိုင်တယ်။ ထိုအရာတွေက ခေတ္တတည်မြဲမှုပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မိမိတို့ လူ့ အသိုင်းဝိုင်းထဲမှာ ဖြစ်နေတာက ပိုက်ဆံရှိသူတွေကို ပသားပေးတာ၊ နေရာပေးတာ၊ ကြောက်နေကြရတာ၊ ဖားတာ၊ ဘက်လိုက်တာတွေ ရှိနေတာက လုံး၀ လက်ခံမသင့်တဲ့ အချက်ပါ။ မိမိတို့က လမ်းကြောင်းမှန်မှာ ရပ်တည်နေရင် ဘယ်သူကိုမှ ပြန်လည် ကြောက်ရွံ့ နေဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့် မျက်စိစုံလုံးမကန်းသင့်ပါဘူး။ တန်းတူသာဆက်ဆံသင့်ပါတယ်။
၃။ စစ်မှန်တဲ့ အောင်မြင်မှုရရှိဖို့ ပိုက်ဆံမလို၊ ပိုက်ဆံ သုံးစရာမလိုပါဘူး။
လူတော်တာ်များများကတော့ အရာတစ်ခုလုပ်ရင် ပိုက်ဆံလိုအပ်တယ်ပဲတွေးကြတယ်။ အခြားထွက် ပေါက်မရှာကြဘူး၊ အများသွားတဲ့ လမ်းကြောင်းကိုပဲ လိုက်တယ်။ ဘဝမှာအောင်မြင်သူတိုင်း ပိုက်ဆံ တစ်ပြားမှမရှိပဲ အောင်မြင်မှုကို တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားရမယ့်အချက်ပါ။ သင့်မှာရှိတဲ့ ပါရမီ၊ လုပ်နိုင်စွမ်း၊ လုပ်ချင်တဲ့ အရာတွေကို တွေးတောစဉ်းစားပါ။ နောက်ပြီး သင့်ကိုယ် သင်အမြဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားပေးပါ။ ဥပမာ ဒီနေ့ ဟာ အရာရာအားလုံး အကောင်းဆုံးတွေနဲ့ ပြည့်နေပါ လိမ့်မယ်။ ပျော်ရွှင်မှု တွေနဲ့ ကြုံရမယ် ဆိုပြီး အကောင်းအမြင်ဖြင့်တွေးစေပါ။ သင့်ဟာ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိစိတ်ချမ်းသာမှုရရှိလာမှာပါ။
၄။ စစ်မှန်တဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ သင့်ကိုယ်သင် စိတ်တိုင်းကျနေတဲ့ အချက်ပါ။
ဆိုလိုတာက တစ်ပါးသူနဲ့ သင်ပြိုင်လိုက်ရင် သင့်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုပိုများလာမှာပါ။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေနဲ့ သင်ဘယ်လောက်အထိ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိတာကိုပဲ ပြန်မေးပါ။ စိတ်ချမ်းသာမှု ဟာ သင့်ကိုယ်တွင်းကနေ ရရှိလာတာပါ။ မိမိမှာရှိတဲ့အစွမ်းအစလေးနဲ့ တတ်နိုင်သ လောက် လုပ်နိုင်တာကပဲ အတော်လေး အောင်မြင်မှု ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တွင်း အားထုတ်မှု ကသာ အောင်မြင်မှုတွေဆီကို တွန်းပို့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ပါးသူရဲ့ အပေါ်မှာမီခိုမှု ကင်းလေ ပိုကောင်း လေပါ။ ဒါမှ မိမိရဲ့ အစွမ်းအစ တွေပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်အခြားသူတွေ အောင်မြင်ရ လဲဆိုတော့သူတို့ကမိမိကိုယ့်ကိုယ်အားကိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။
၅။စစ်မှန်တဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ အလုပ်ကိုကြိုးစားပြီး ဇွဲ့ မလျှော့ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်မှုကို နေ့ ချင်းညချင်း မရောက်နိုင်ပါဘူး။ လူတွေက အမှားတစ်ခု နှစ်ခုလောက်
လုပ်လိုက်ရင် စိတ်ဓာတ်ကျပြီး ရှေ့ ဆက် မတိုးချင်ကြတော့ပါဘူး။ ဒါဟာ အောင်မြင်မှုကိုရပ်တန့် စေတဲ့အဓိက အချက်ဖြစ်တယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကျဆုံးမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ မိမိစိတ်က အရင်ကျနေလို့ မဖြစ်လို့ပါ။ လမ်းခုလပ်မှာ အမှားတွေနဲ့ ၊ ကျဆုံးမှုတွေနဲ့ တွေ့ ကြုံရင်မိမိမှာ အားအင်း အပြည့်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မနားတမ်းဇွဲမလျှော့ပဲ အလုပ်ကြိုးစားခြင်းအားဖြင့် အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်းကို အလိုလိုရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ့်။ တွေးပူပြီး ဘာမှ အလုပ်မလုပ်ရင် မထူးပါဘူး။ အဓိက က အနာဂတ်အတွက် အောင်မြင်ဖို့ ဟာ လက်ရှိမှာ အလုပ်ပုံမှန်လုပ်ကိုင်ဖို့ ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့စာရေးဆရာPeleဆိုထားတဲ့Success is no accident. It is hard work,
perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do. ဘာသာပြန်ရရင်တော့.. အောင်မြင်မှုဆိုတာ အလိုလိုနဲ့ ဖြစ်လာတာမဟုတ်။ ကြိုးစားမှု၊ လုံ့လဝိရိယရှိမှု၊ သင်ယူမှု၊ အနစ်နာခံမှု နဲ့ မိမိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်အပေါ်မှာနဲ့ သင်ယူနေတဲ့ အရာတွေအပေါ်မှာ ချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ အားလုံး စစ်မှန်တဲ့ အောင်မြင်မှု ကို လက်တွေ့ခံစားနိုင်ကြစေဖို့ စေတနာဖြင့် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အောင်မြင်မှုကလက်တကမ်း မှာပဲရှိနေတာပါ…။
Previous Previous post: အသက်ကြီးမှ မော်ဒယ်အလုပ်စလုပ်ခဲ့တဲ့ အသက် (၆၅) နှစ်အရွယ် ဖက်ရှင်မော်ဒယ်
Next Next post: အိပ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အကြာကြီးအိပ်နေမိတဲ့အခါ